राष्ट्र,राष्ट्रियता र नेपाली एकता – Saptarangi
हाम्रो राष्ट्रियता भारत, केन्यालगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । शान्तिप्रिय देश नेपाललाई साम्राज्यवाद–उन्मुख उग्र राष्ट्रवादको अवलम्बन गर्नु छैन ।
राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्छ, धर्मले हामीबीच पर्खाल खडा गर्छ, संस्कृतिले हामीलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्छ, तर देशको प्रेमले सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्छ । आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम मानिसको दोस्रो धर्म हो जसको अभिव्यक्ति राष्ट्रियताको भावनामा हुने गर्छ ।
कुनै पनि धर्म वा वादका भन्दा राष्ट्रियताका अनुयायीहरू अधिक हुने गर्छन् किनकि यसमा अन्तर्निहित भावनात्मक, प्रेरणात्मक र संवेगात्मक ऊर्जाले व्यक्तिलाई स्वयम् आत्मविसर्जन गर्नसमेत प्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ। मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ, राष्ट्रियता बदल्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता संकुचित जातीय–सांस्कृतिक राष्ट्रियता होइन जसले कहिलेकाहीँ ‘राष्ट्रभित्रको राष्ट्र’ को परिकल्पना गर्न थाल्छ । नेपाली राष्ट्रियता यस्तो भावनात्मक एकता हो जसमा देशभित्रका भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित विविध ‘पेटी नेसनालिज्म’ हरू एउटै नेपाली ‘राष्ट्र’ को भावनामा एकीकृत भएका हुन्छन् ।
यो भनेको आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक आसक्ति हो । फ्रेन्च विद्वान् अर्नेस्ट रेनमको मननयोग्य भनाइ छ, ‘राष्ट्रको सार के हो भने, यसमा सबै व्यक्तिका धेरै साझा कुरा हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले धेरै कुरा बिर्सिएका हुन्छन् ।’ देशभित्र विभिन्न समुदायका आआफ्ना भाषा, संस्कृति, धर्मको प्रवर्द्धनका कुराहरू भइरहन्छन् । तर, नेपाली राष्ट्रियताका लागि केही साझा मान्यतामा बृहत्तर एकता भएको छ ।
अहिले नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भइरहेको छ जसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ । राजनीतिमा सधैं सही वा गलत (राइट अर रङ) को कुरा हुँदैन, बरु दक्षिण वा वाम (राइट अर लेफ्ट) को कुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ । सत्तामा रहनेहरूका लागि सत्ता एक मात्र स्वार्थ हुने र विपक्षीहरू रचनात्मक हुनुभन्दा विरोधमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति राजनीतिको सामान्य खेलजस्तै हो । तर, परिस्थिति यस्तो भइदिन्छ, उनीहरूका क्षुद्र स्वार्थहरू राष्ट्रिय गौरवसामु गौण हुन पुग्छन् । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका स्वार्थप्रतिको संकीर्ण निष्ठाको स्थान राष्ट्रिय निष्ठाले लिन पुग्छ ।
केहि महिनाअघिदेखि नेपाली गौरव, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण भएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्र महाकाली नदीपूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको हाम्रो स्वामित्वमाथि छिमेकी मुलुक भारतबाट धावा बोलिएको छ । छ दशकअघिसम्म नेपालको प्रशासन निर्विघ्न रूपमा चलेको भूभागलाई भारतले केही महिनाअघि आफ्नो नक्सामा समावेश र त्यहाँ सडक निर्माण गरेपछि नेपालीहरूले ठूलो धोका भएको महसुस गरेका छन् । अप्ठेरो पर्दा उक्त भूभाग प्रयोग गर्न दिने नेपालको सदाशयप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेमा भारतबाट यति साह्रो कृतघ्नता किन प्रदर्शित गरियो, बुझ्न सकिएको छैन । नेपालको विश्वास र मित्रतामाथि छिमेकी मुलुकबाट भएको रकमी र झेली कामबाट नेपालीहरू झस्किएका छन् । तर, हरेक कामको सकारात्मक पाटो पनि हुने गर्छ । ‘मौरीमा खील मात्र हुँदैन, मह पनि हुन्छ’ भन्ने आहान नै छ ।
हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथिको यो प्रहारबाट नेपालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । कहिल्यै नमिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू, एकअर्काबीच छुवाछूतको जस्तो व्यवहार गर्नेहरू, राज्यसँग समन्यायिक व्यवहार भएन भनी गुनासो गरिरहेका वर्गहरू सबै राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन एक ढिक्का भएका छन् । यही हो नेपालीले गौरव गर्ने परम्परा, वीर पुर्खाहरूले दिएको संस्कार । देशप्रेमको यही शक्ति र ऊर्जाले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सदैव सुरक्षित रहने सुनिश्चितता दिन्छ ।
राष्ट्रियता भावना र यथार्थ दुवै हो । यो हाम्रो पहिचान हो, स्वाभिमान हो र गौरव हो । यसको भावनात्मक अभिव्यक्ति चिह्न (सिम्बोल), प्रतीक, गान, संगीत, उत्सव र संस्कृतिमा हुने गर्छ । यथार्थमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरण सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सामाजिक एकीकरण, साझा राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक सञ्चयनबाट हुने गर्छ । अहिले नेपाल भावनात्मक राष्ट्रियताको चरणमा छ । राष्ट्रियताप्रतिको नेपालीहरूको चट्टानी अडानले नेपाल सरकारलाई ठूलो बल प्राप्त भएको छ जुन यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । यही दबाब र बलमा सरकारले हाम्रो राष्ट्रको नक्सा परिवर्तन गरेको छ र संविधानको निसान छाप रहेको अनुसूचीमा नयाँ नक्साअनुरूप संशोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियाबाट पारित भइसकेको छ ।
नेपालीहरूमा फाटो ल्याई यस प्रक्रियालाई ‘फेल’ गराउन सकिन्छ भनेर थालिएको अदृश्य खेल त्यस बेला असफल भयो जब सबै राजनीतिक दलले संशोधनलाई समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गरे । अझ मननयोग्य कुरा त के देखियो भने, नेपाली र भारतीय मिडियादेखि बुद्धिजीवी भन्नेहरूले भारतनिकट रहेको भनी ‘ट्याग’ लगाइदिएका दलहरूले समेत स्वस्फूर्त रूपमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर राष्ट्रियता कसैको पेवा नभएको प्रमाणित गरिदिएका छन् । नेपालीहरूका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? ‘राम्रो कसिएको गाँठोलाई फुकाउन सकिन्न, लट्ठीको मुठोलाई भाँच्न सकिन्न’ भन्ने उखान छ । यसबाट यस्तो कुत्सित प्रयास गर्नेहरूले पक्कै शिक्षा लिए होलान् ।
नेपाल सरकारले भने यसबाट राम्रै पाठ सिक्न जरुरी छ । पहिलो त राष्ट्रियता दल वा भेगविशेषको पेवा नभई सबै दल, वर्ग, भेगको साझा सरोकार हो । राष्ट्रियताको मर्म त्यसलाई बढी थाहा हुन्छ जसले आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसलाई अनुभूति गरेको हुन्छ । सुस्तामा अतिक्रमण हुँदा लड्ने त्यहाँका बासिन्दाहरू, बर्सेनि डुबानको समस्या भोगेका मधेसी समुदायहरू, विदेशमा पहिचानविहीन भएका नेपालीहरूलाई राष्ट्रियताको वास्तविक मर्म अरूलाई भन्दा बढी थाहा छ । विदेशमा बसेर देश फर्किन लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो झन्डावाहक विमानमा प्रवेश गर्दाको भावना र नेपालको भूमि टेक्दाको मनोविज्ञानमा राष्ट्रियता परिभाषित भएको हुन्छ ।
अहिलेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतालाई कसरी अझ स्थायी र मजबुत गराउने भन्नेमा सरकारको चिन्तन र निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । देश रहे राजनीति गर्न पाइन्छ र आफ्ना वर्गीय मागहरू राख्न पाइन्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ । यस्तो एकताबाट सिर्जित अवसर कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुन्छ । यसलाई अमूल्य पुँजीका रूपमा प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारमा रहनेहरूको हुन्छ ।
नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार हुन भने आवश्यक छ । अमुक संस्था वा दल अराष्ट्रवादी र आफू मात्र राष्ट्रवादी भन्ने संकीर्ण सोचाइबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजाको एकल ‘कमान्ड’ मा चल्ने पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका सरकारहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेको देखिएको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल– भारतबीचका विभिन्न वार्तामा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमालाई विवाद समाधान हुन बाँकीमा राखिएको देखिन्छ । २०४७ सालपछिका सरकारहरूबाट पनि यो भूमिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लगातार प्रयास भएकै छ ।
नापी विभागको नेतृत्वको टोलीदेखि परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरको संयन्त्रले यो र सुस्ताको विवाद समाधान नभई ‘स्ट्रिप म्याप’ मा दस्तखत गर्न नमानेकै हो । अहिले पनि यी संयन्त्रहरूमा भाग लिने तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीहरू जीवित नै हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसमा लिनुभएको अडान कसैले भुल्न सक्दैन । यस पंक्तिकारले पनि सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठकहरूमा विवाद रहेका स्थानहरू ‘स्टाटस को’ मा राखिनुपर्ने निर्णयमा दस्तखत गरेको छ । राष्ट्रियता सबैका लागि उत्तिकै प्रेरणात्मक हुन्छ र देशप्रेम सबैको भावनामा बहेको हुन्छ । त्यसैले सबै नेपालीको संवेगात्मक मनोविज्ञानलाई हाम्रो राष्ट्रियता अझ सुदृढ बनाउनमा परिचालित गर्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रो राष्ट्रियता स्व–चेतन (सेल्फ कन्सस) हो, भारत र केन्या लगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । हाम्रो राष्ट्रियता आक्रामक राष्ट्रियता पनि होइन, जुन जर्मनी र जापानले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अवलम्बन गरेका थिए । शान्तिप्रिय देश नेपाललाई साम्राज्यवाद–उन्मुख उग्र राष्ट्रवाद (जिंगोइज्म) को अवलम्बन गर्नु छैन । हाम्रो राष्ट्रियता त विशुद्ध देशप्रेमको पर्याय हो । गौतम बुद्धको देश नेपाल उनैले प्रतिपादन गरेको ‘पञ्चशील’ मा अटुट आस्था राख्छ । ‘पञ्चशील’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउने पण्डित नेहरूको देश अहिले किन त्यही सिद्धान्तबाट विमुख भइरहेछ ? सन् १९५४ को भारत–चीन सम्झौतामा पञ्चशीलका सिद्धान्त उल्लेख गरिएका थिए । एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन् । भारतले नेपालका सन्दर्भमा पनि यी सिद्धान्तको पालना गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।
नक्सा फेर्नु र संविधानको अनुसूचीमा तदनुरूप परिवर्तन गर्नुले मात्र त्यस क्षेत्रमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता कायम हुन सक्दैन । यसका लागि अझ चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ । त्यसको प्रारम्भ भनेको प्रभावकारी कूटनीति हो । भनिन्छ— कूटनीतिमा राजदूत देखिनुपर्छ तर सुनिनु हुँदैन । यसको मर्म भनेकै यसभित्रका धेरै कुरा भित्रभित्रै शान्त कूटनीतिमार्फत भइरहेका हुन्छन् । नेपालमा लैनचौर चाहिनेभन्दा बढी सुनिने गर्छ, खुलेआम हल्ला गर्ने गर्छ । तर, नयाँ दिल्लीमा हाम्रो दूतावास देखिन पनि छाड्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो कूटनीतिक कौशलमार्फत हाम्रा महामहिम राजदूतहरूले नेपालको गौरव बढाउन सकून् भनी कामना गर्न सकिन्छ ।
सरकारले भने जनविश्वास आर्जन गर्न अझ निकै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ । यही नक्सा र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिसक्दा पनि यिनीहरूले यो दबाबमा फिर्ता लिन्छन् भन्दै जनप्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास गरेको सडक–गफ सुनियो । नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूको जिज्ञासा पनि यस्तै थियो ।
यो डरलाग्दो नकारात्मक सोचलाई कामबाटै सकारात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । कणिक नीतिमा उल्लिखित भनाइ सरकारमा रहनेहरूका लागि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ, ‘समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै काम सफल पार्छन् ।’ हामीलाई उत्तेजित हुनु छैन, गालीगलौजको दोहोरी खेल्नु छैन । अकाट्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर सत्यको लडाइँ लडेमा चाँडै हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ ।
सत्यको विजय सदैव हुन्छ । अर्को पक्षले बुझ्नुपर्छ, आफूलाई दुख्ने घाउ अरूलाई पनि दुख्छ । उग्र राष्ट्रवाद वा ‘जिंगोइज्म’ लामो समय टिक्दैनन् । अहिले रोमन साम्राज्य कहाँ छ ? शक्तिशाली स्पेनको अवस्था के छ ? गौरवशाली युनान कहाँ छ ? कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायत कुन साइजमा छ ? यस्ता इतिहासबाट सिकेमा सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ ।यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Posted in कोरोना बिशेष, खेलकुद, ट्रेन्डिङ, ब्यापार, मनोरञ्जन, विदेश, समाचार
Prevबिपत व्यवस्थापनमा गैरजिम्मेवार राज्य
Nextमहन्थ ठाकुर सात मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने निश्चित